China Galvanized welded wire harato orinasa sy mpamatsy | XINTELI
Anaran'ny vokatra: harato vita amin'ny vy mifono vy
Fitaovana: tariby karbaona ambany kalitao avo lenta
Fitsaboana ety an-tany: nohosorana mafana & nohosorana herinaratra
Ny metaly tariby mifangaro vy dia vita amin'ny tariby vy karbaona avo lenta. Aorian'ny fametahana tarehimarika sy famoronana fitaovana mekanika mandeha ho azy tsara sy marina dia raisina ny fitsaboana ambony ny fizotran'ny zinc. Ny famokarana fenitra britanika mahazatra dia miteraka endrika malefaka sy milamina, rafitra mafy orina ary fampisehoana tsara amin'ny ankapobeny.
Ny fantsom-pifandraisana vita amin'ny fantsom-boaloboka dia mizara roa: ny fantson-drivotra elektrika sy ny fantson-drano mafana. Afaka misafidy milentika mafana ianao aorian'ny fantsom-panafody na alona mafana alohan'ny fantsom-panafody. Raha mila anti-harafesina elabe ianao na ampiasaina any ivelany, manoro anao aho mba hisafidy mafana nilentika nandrisika.
Afaka manome fomba roa isika: kofehy vita amin'ny harato tariby ary tontonana vita amin'ny tariby.
Haben'ny habe: 1/4 '', 3/8 '', 1/2 '', 5/8 '', 3/4 '', 1 '', 2 '' sns.
Savaivony tariby: BWG16 ~ BWG25
Halavany: 5m, 10m, 25m, 30m, 45m sns.
Ambainy: 0.m ~ 1.5m
Endri-javatra: namana ara-tontolo iainana, mora adika, mampiasa fiainana lava, fisaka sy malamalama.
Ny harato tariby dia matetika ampiasaina amin'ny indostria, fambolena, fananganana, fitaterana, fitrandrahana harena ankibon'ny tany ary indostria hafa. Toy ny vala amin'ny milina, vala biby sy biby, fefy voninkazo sy hazo, mpiambina varavarankely, vala famakivakiana, tranom-borona, sobika ary sobika ara-tsakafo any trano sy birao, harona taratasy ary haingon-trano
3.5 Fandoavana sy fandefasana
Previous: PVC Coating lasitra tariby mifono vy
Manaraka: PVC mifono hexagonal tariby harato